Sara Saker Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Sarah Saker
Kune akawanda ecommerce vatengesi kunze uko - uye iwe uri mumwe wavo. Iwe uri mairi kwenguva refu yekutakura. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kukwanisa kukwikwidza neakanakisa emazana ezviuru ezvitoro zvepamhepo izvozvi zviri paInternet nhasi. Asi unozviita sei? Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako inokwezva sezvinobvira. Kana isina kugadzirwa zvakanaka, isina zita rakakura,